Diyaaraddaha Qatar Airways oo 15 jeer isticmaalay Hawada Soomaaliya tan iyo shalay – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Diyaaraddaha Qatar Airways oo 15 jeer isticmaalay Hawada Soomaaliya tan iyo shalay
Sarkaal ka tirsan Waaxda Duulista Hawada ee Soomaali ayaa sheegay in ugu yaraan 15 jeer ay isticmaaleen hawada Soomaaliya diyaaradaha Qadar Airways tan iyo markii qaar kamid ah dowladdaha Carrabta ay xiriirka u jareen dowladda Qadar.
“Diyaaraddaha Qadar Airways, ayaa hal ama laba duullimaad ku imaan jiray dalka Soomaaliya maalin kasta, ka hor inta aysan qarxin xiisada u dhexeysa Qadar iyo qaar kamid ah dowladda Carrabta”, sidaasi waxaa wakaalladda wararka ee AP u sheegay Sarkaal ka tirsan waaxda duulista hawada ee Soomaaliya oo aan fasax u heysan in uu warbaahinta la hadlo.
Isniintii lasoo dhaafay, dowladdaha Sacuudi Carabiya, Masar, Baxrayn iyo Isutagga Imaaraadka Carrabta ayaa xiriirkii diplomaasiyadeed u jaray dawladda Qadar, iyaga oo ku eedeeyay in ay daganaansho la’aan ka wado gobolka.
Siyaasada arrimaha dibada ee Soomaaliya?
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa wajahaya loolankii ugu adkaa ee dhanka siyaasada arrimaha dibadda tan iyo intii uu xafiiska yimid.
Farmajo ayaa booqasho ku tegay wadamadda Sacuudiga, Immarradka iyo Qadar, isagoona heshiisyo lasoo kala saxiixday.
Sanadkii 2016, markii dowladda Sacuudiga ay xiriirka u jartay dalka Iraan, dowladda Soomaaliya iyana waxaa ay xiriirka u jartay dalka Iraan, waxaana magaalladda Muqdishu laga ceyiyay shaqaallihii safaarada Iraan ee Soomaliya.
Hawada iyo Badda Soomaaliya ayaa muhiim u ah dowladdaha hadda siyaasada diplomaasiyadeed isku haya, waxaana midaasi laba daran mid dooro ay u tahay Soomaaliya.
Dhageyso:-Ra’iisul Wasaare ku xigeenka oo maanta furay Mashruuc iskaa wax u qabso ah